Indlela yokusebenzisa "Mina, Wena, Yena, Yena, We," ngesiJapan
Isivakalisi igama elithatha indawo yesabizo. NgesiNgesi, imizekelo yezivakalisi ziquka "mna, bona, ngubani, oku, akukho," njalo njalo. Ukuthetha ukukwenza imisebenzi eyahlukeneyo yegrama kwaye ke isetyenziswe ngokubanzi kwiilwimi ezininzi. Kukho amaninzi amanqamana nezivakalisi ezifana nezenzibizo zomntu siqu , izimelabizo ezixelisayo, izivakalisi eziphathekayo, izimelabizo zokubonisa, kunye nokunye.
I-Japanese ne-English Pronoun Useage
Ukusetyenziswa kwezibhengezo zaseJapan zihluke kakhulu kwiNgesi.
Azisetyenziswanga ngokuphindaphindiweyo njengabahlobo babo besiNgesi, nangona kukho izidibanisi ezahlukeneyo ngesiJapane kuye kuxhomekeke kwisini okanye isitala yentetho.
Ukuba umongo ucacile, amaJapane akhetha ukusetyenziswa kwezivakalisi. Kubalulekile ukuba ufunde indlela yokuyisebenzisa, kodwa kubalulekile ukuqonda ukuba ungayisebenzisi njani. Ngokungafani nesiNgesi, akukho mgaqo oqinileyo wokuba nesifundo segrama kwisigwebo.
Indlela Yokuthi "Ndiye"
Nazi iindlela ezahlukahlukeneyo zokuthi "mna" kuxhomekeke kwimeko kwaye ubani uthetha naye, nokuba ungumphakamileyo okanye umhlobo osondeleyo.
Watakushi わ た く し --- kakhulu ngokusemthethweni
watashi わ た し --- ehlelekile
boku (yindoda) 仆, atashi (ibhinqa) あ た し --- engafanelekanga
I-ore (yindoda) 俺 --- engacwangciswanga
Indlela Yokuthi "Wena"
Ezi zilandelayo iindlela ezahlukeneyo zokuthi "wena" kuxhomekeke kwiimeko.
otaku お た く --- kakhulu esemthethweni
Anata あ な た --- ehlelekile
kimi (yindoda) 君 --- engafanelekanga
i-omae (yindoda) お 前, anta あ ん た --- kakhulu engacwangciswanga
Ukusetyenziswa kwamagama aseJapan
Phakathi kwezi zivakalisi, "watashi" kunye "anata" zizona ziqhelekileyo. Nangona kunjalo, njengoko kukhankanywe ngasentla, bahlala bekhutshwe kwingxoxo. Xa uthetha ophezulu, "i-anata" ayifanelekanga kwaye kufuneka igwenywe. Sebenzisa igama lomntu endaweni yoko.
"Anata" isetyenziswe ngabafazi xa bethetha nabayeni babo.
"I-Omae" ngamanye amaxesha isetyenziswa ngamadoda xa bethetha nabafazi babo, nangona ivakalekile.
Umntu wesithathu uvakalisa
Izibhengezo zomntu wesithathu zi "kare (yena)" okanye "kanojo (she)." Endaweni yokusebenzisa la magama, kukhethwa ukusebenzisa igama lomntu okanye uchaze ngokuthi "ano hito (loo mntu)." Akukho imfuneko yokubandakanya isini.
Nazi izibonelo zezivakalisi:
Kyou Jon yi-aimashita.
I-今日 ジ ョ ン に 会 い ま し た.
Ndambona (John) namhlanje.
あ の 人 を 知 っ て い ま す か.
Ukongezelela, igama elithi "kare" okanye "kanojo" lisoloko lithetha inkwenkwe okanye intombi. Nantsi imigaqo esetyenziswe kwisivakalisi:
彼 が い ま す か.
Ingaba unayo umfana oncumisana nayo?
私 の 彼女 は 看護 婦 で す.
Intombi yam ngumhlengikazi.
IziLawuli zeNkcazo zoLuntu
Ukwenza ezininzi, isiqulatho "~ tachi (~ 達)" songezwa ngathi "watashi-tachi (thina)" okanye "anata-tachi (ubuninzi)".
Isixelongo "~ tachi" singenakongezwa kuphela kwizibhengezo kodwa kwezinye izibizo ezibhekiselele kubantu. Ngokomzekelo, "kodomo-tachi (子 供 達)" ithetha "abantwana."
Ngelinye igama elithi "anata," isigxina "~ gata (~ 方)" sisetyenziswe ngamanye amaxesha ukwenzela ubuninzi kunokusebenzisa "~ tachi." "U-Anata-gata (あ な た 方)" uhlelekile kakhulu kunokuba "anata-tachi." Isilwanyana "~ ra (~ ら)" sisetyenziselwa "kare," njenge "karera (bona)."
Indlela yokusebenzisa iiproposti ngeelwimi ngesiNgesi
Indlela yokudibanisa "Ukwamkela" (Ukwamkela, Thatha)
IiNcwadi eziPhambili zesiLwimi zesiFrentshi
Ces vs. Ses - French French
Ukukhubazeka komncintiswano: NL MVP
Yiba nguMyili weZakhiwo zoKwakha
10 Iindaba eziNyaniso zeeNgelosi
I-Lake Superior State University Admissions
Umbala Wezinwele Zezinwele: Indlela Imbala Yemibala Esebenza ngayo
Indawo yokuhlala, ukulungiswa kunye nokuNcediswa kwiKlasi